8:25 PM LeaveaComment Read More
Facebook ကို စစသိသိချင်းတုန်းကတော့ ဘာကြီးတုန်း ဆိုပြီး ကောင်းကောင်းလည်း မသုံးတတ် - ဘာလုပ်ရမှန်းလည်း မသိ - အသိသညာလည်း မရှိနဲ့ ယောင်လည်လည် ဖြစ်ပြီး မဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး - ဒါပေမယ့် ဟိုလူက Facebook မှာ လယ်စိုက်တယ် ဒီလူက မာဖီးယား ဘာညာ စသဖြင့် ကြုံလာရတော့ ဘာတွေများ ထူးခြားလဲ ဆိုပြီး Links တွေတောင်း လိုက်ဆော့ကြည့်ခဲ့ရာ ကနေ တော်တော်ကြီးကို အစွဲကြီး စွဲခဲ့လို့ မနည်းဖြတ်ယူ ခဲ့ရပါသေးတယ် - အထူးသဖြင့်တော့ Farmville နဲ့ Mafia က တော်တော်စွဲ တယ်လို့ ထင်ပါတယ် - တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ မတူဘူးပေါ့လေ - တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေ ကျတော့လည်း မာဖီးယား တာထက် အကောင်လေးတွေ မွေးပြီး ဆော့ရတဲ့ Pet Society တို့ ဘာတို့ ပို သဘောကျကြတာပေါ့- အခု ဒီအကြောင်း ရေးဖြစ်တာကလည်း Facebook ကျွမ်းကျင်ပြီးသား သူတွေ အတွက် မဟုတ်ပါဘူး - Facebook ဝင်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ သူတွေ - ဂိမ်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ အားကြိုးမာန်တက် ဆော့နေသူတွေ အတွက် အပြောင်းအလဲလေးလည်း ဖြစ်အောင် Facebook က နာမည်ကြီး ဂိမ်းအမျိုး ( ၂၀ ) လောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ - ဂိမ်းစွဲပြီး Facebook က မထွက်နိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော် KznT ကို အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ - ကျွန်တော်က ဗဟုသုတ အဖြစ် ဝေမျှတာပါ။
အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း ထိပ်ဆုံးက လာတာတော့ သူ >> FarmVille ပါပဲ။ ဘာလုပ်လို့ ရလဲ ဆိုရင် စစချင်း ဝင်တာနဲ့ မြေကွက် သေးသေးလေး တစ်ကွက်ရမယ် - သူက ပေါင်းလေး ( ၆ ) ပေါင်းလား မသိဘူး အပင်လေးတွေ စိုက်ပြထားတယ် - အဲဒီက လွတ်တဲ့ နေရာလေးတွေမှာ အပင်လေးတွေ စိုက်ရတယ် - တစ်ရက်တန်သည် နှစ်ရက်တန်သည် စောင့် နောက်နေ့ရောက်ရင် ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့ နေရာလေးက အသီးလေးတွေ သီးနေတာ တွေ့ရော - တကယ့် အပြင်မှာလိုပဲ ကိုယ့် အပင်လေးတွေ ကိုယ့်ပေါင်းလေးတွေက အသီးလေးတွေ သီးနေရင် အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းတာပဲ - အဲလိုနဲ့ ရတဲ့ အသီးလေးတွေကိုရောင်း မြေကွက်တွေဝယ် - ထွန်စက်တွေဝယ် - အိမ်တွေဆောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရ တော်တော်လေး ပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းပါ - အဓိကက lvl မြင့်လာရင် သူငယ်ချင်းများများ ရထားဖို့နဲ့ အသီးအနှံတွေကို အချိန်ကိုက်ပြီး စိုက်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရေးပြရရင် စိတ်ဝင်စားစရာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ Real-time farm simulation game ဆိုတော့ တော်တော်လေးလည်း ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ စမ်းဆော့ကြည့်ပါ။
သူကတော့ နဲနဲ စရိုက်ဆန်တယ် - စစဆော့ချင်းတော့ နည်းနည်း နားလည်ဖို့ ခက်တယ် - ဘာလုပ်လို့ လုပ်နေမှန်း မသိဘူး - ဒါပေမယ့် ဆော့ရင်းနဲ့ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ သူက Mafia Wars ဆိုတဲ့ အတိုင်း စရိုက်ကောင်တွေပါ - လူဆိုးတွေ နဲ့ ပေါင်းရတယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း လူဆိုးပဲ - အလုပ်လုပ်ရတယ် - ပိုက်ဆံ ရှာရတယ် - ကိုယ့် အကောင်ကို လက်နက်ကောင်းကောင်းတွေ ဆင်ရတယ် - Defence ကောင်းအောင်လည်း လုပ်ရတယ် - စီးပွားရေးမှာလည်း မညံ့ရဘူး - သူများကိုလည်း သတ်နိုင်ရတယ် - ကိုယ့်ကိုယ်လာသတ်ရင်လည်း ကိုယ်က ပြန်ဆော်နိုင်ရတယ် - ဂိုဏ်းနဲ့ ဆော့ရတာမျိုး ဆိုတော့ Mafia Size ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ် - Mafia Size တစ်ချို့ဆို တော်တော်ကြီးတယ် - Mafia Size ကြီးတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုရင် ကိုယ့်ကောင် Power တက်တယ် - တော်ယုံလူရှိန်တယ် - ကိုယ့်ကို လာချလို့ မကျေနပ်ရင် Hit List တင်ပြီး ကိုယ့် ဂိုဏ်းက အပေါင်းအပါတွေကို ပြန်ချခိုင်းလို့ ရတယ် - စသဖြင့် စုံနေတာပါပဲ - စစဆော့ချင်းတော့ ဘာကြီးလဲဟ - တစ်ယောက်ယောက်ကို သတ်လိုက်လို့ ကိုယ်နိုင်တယ်ဆိုရင် Win ကိုယ်ရံှုးရင် Lose ဆိုပြီး စာတွေ တက်လာတာမျိုး ဆိုတော့ သိပ် Feel မလာသလိုပဲ - နောက်တော့ အပေါင်းအသင်းတွေ ရပြီး တစ်နေ့လုံး အဲ့ထဲကကို မထွက်တော့ဘူး - တွေ့သမျှ လူလိုက်သတ်တာ - :D အဲတော့ အနှစ်ချုပ်ချင်တာ မဆော့ဖူးသေးသူများ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် သတ်တာ ဖြတ်တာ ဆိုတော့ ယောကျာင်္းလေးများ သဘောကျနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဂိမ်းကတော့ စိန်စီတယ် ပြောရမလား - မှားလို့ ရတနာ စီတာ - နဲနဲလေး ခက်တယ် - ခက်တယ်ဆိုတာ အချိန်ကြီး ပေးထားတော့ သူပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်း ဆုရအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်ဘူး - တစ်မိနစ် အတွင်းမှာ Score points ဘယ်လောက် ရအောင် လုပ်နိုင်လဲ - ဒါကို ကြည့်ပြီး သူက အမှတ်ပေးတယ် - ကျွန်တော်တော့ လောလောဆယ် ဆော့နေတာ သုံးရက်ပဲ ရှိသေးတယ် - 146650 အများဆုံး ရဖူးတယ် - ဒီ့ထက်ပိုပြီး မကျော်နိုင်သေးဘူး - စစချင်း လက်တုန် ခြေတုန်ဖြစ်မယ် - ဘယ်ကဟာ ဘယ်နားရွှေ့ရမှန်း မသိဘူး - နောက်တော့ အထာနပ်လာမယ် - ဆော့ရင်းနဲ့ ပျော်ဖို့ ကောင်းသွားမယ် - အဲတော့ ဆော့ကြည့်တာ မမှားဘူး :D
သူကတော့ ဖဲ - ဝိုင်းကောင်းတယ် - ဝိုင်းတွေလည်း မနဲဘူး - ရံှုးလည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး - အသိတွေ ဘာတွေ ရှိရင် ပိုက်ဆံတွေ ဘာတွေလည်း ဆွဲလို့ရတယ် - ထိုင်မိရင်တော့ မထတမ်းပဲ - တကယ့် ပိုက်ဆံ အစစ်နဲ့ ရိုက်ချင်လည်း ရတယ် - ဒါပေမယ့် စိတ်ရှည်ဖို့ လိုတယ် - Game money နဲ့ ရိုက်ရင်သာ လူတွေက All-in မကြာခဏ လုပ်ကြတာ - တကယ့် Real Money နဲ့လည်း ဆိုရော ၁ ကျပ်ကို ၅ မူးချြွေပီး ဆော့ကြတယ် - ကိုယ်လိုလူတောင် သူတို့လောက် စိတ်မရှည်နိုင်ဘူး - စိတ်မရှည်တဲ့ လူကတော့ ပြုတ်တာပဲ :D သတိတော့ထားပါ - ဂိမ်းမန်းနီးနဲ့ပဲ ဆော့ကြပါ။
လူတိုင်းမှာ Birthday ရှိကြတော့ - ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ လူတိုင်းမှာလည်း တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ Birthday ကျရင် လက်ဆောင်လေး ဘာလေး ပေးကြရတာပေါ့ - Facebook မှာတော့ ဒီတာဝန်ကို Birthday Cards က တာဝန်ယူပါတယ် - ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ကဒ်လှလှလေးတွေ ရှိတယ် - အထဲထဲမှာ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်လို့လည်း ရတယ် - အရောင်မျိုးစုံ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလို့ ရတယ်- ပုံလေးတွေ - ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာလေးတွေ ထည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ကောင်လေး/ ကောင်မလေးတွေ ပျော်အောင် ကဒ်လေး တွေ ပို့လို့ ရတယ်။
သူကတော့ ငါးလေးတွေ မွေးတာ - ကျွန်တော် စစချင်း တော်တော်ကြာကြာ ဆော့ဖြစ်သေးတယ် - နောက်တော့ ကျွန်တော့်ငါး တွေ လာလာခိုးတာ ခံရလို့ စိတ်တိုပြီး မဆော့တော့တာ :D သူဂိမ်းကို မဆော့ ဆော့အောင် အဲ့ဒီ့ ငါးခိုးတဲ့ function ကြီး ထည့်ထားတော့ ကျွန်တော့်မှာ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဘယ်တော့ ငါးခိုးခံရမလဲ ဆိုပြီး စောင့်ဖမ်းနေရတာက တစ်လုပ် - အဲတာနဲ့ စိတ်ကုန်ပြီး Happy Aquarium ကနေ နောက်ထွက် FishVille ကို ပြောင်းဆော့လိုက်တယ် - သူလည်း မိုက်တယ် - ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် စိတ်ထင် Happy Aquarium က ငါးလေးတွေက FishVille က ငါးတွေထက် ပိုချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် ထင်မိတယ်။ FishVille က ငါးတွေကတော့ ရုပ်နည်းနည်း ဆိုးသလို - အကျည်းတန် မှန်ကြိုက်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာ :D
သူကတော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးသား FishVille - သူလည်း ဆော့လို့ ကောင်းတယ် - သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ် နောက် သူမွေးတဲ့ ကန်သွား - သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေး - သူငယ်ချင်းက ပြန်လာ ကိုယ့်ကန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေး - ငါးလေးတွေ ပုံမှန် အစာကျွေး - ကိုယ်က များ အစာချလိုက်ပြီ ဆိုရင် လာလာဟပ်ကြတာ - အသည်းကို ယားရော :D - အကောင်လေးတွေ ကြီးလာရင် ရောင်း ကိုယ့်ကန်လေးကို အလှဆင် - ပစ္စည်းတွေ ဝယ် - ငါးလှလှလေးတွေ ဝယ် စသဖြင့် ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မြန်မာလို ပြောရင်တော့ ကော်ဖီကမ္ဘာ ခေါ်မလား - ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ပဲ အများဆုံး ရင်းနှီးတာမို့လို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်တယ်လို့ပဲ မှတ်ထားတယ် - စစချင်း အနုတ်စုတ် ဂုတ်စုတ် ဘဝကနေ စပြီး ဆိုင်ဟဲဗီးကြီး ဖြစ်လာအောင် ဆော့ရတာ - ဆိုင်စစဖွင့်ချင်းဆို ရောင်းလို့ကို လက်မလည်ဘူး - လာစားတဲ့ လူတွေကို ကြည့်လို့ Facebook ထဲက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ဆိုတော့ မြင်ရတာ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်း - တစ်ခါတစ်လေ ဝန်ဆောင်မှု မကောင်းရင်လို့ ဆိုင်သန့်ရှင်းညံ့ရင်တို့ ဆိုများ ဝင်မစားပဲ လှည့်ထွက်တဲ့ လူတောင် ရှိသေးတယ် - အဲလို လူမျိုးဆို တံခါးပေါက်ဝ ကနေ ဆောင့်ကန်ချင်တာ :D ဒီက မအားလို့ မလုပ်နိုင်တာကို - ကောင်းတာ တစ်ခုက သူက Energy မကုန်မချင်း ဖိုဆရာကိုရော - စားပွဲထိုးကိုရော သူ့ဘာသာ Auto run ခိုင်းထားလို့ ရတယ်။ နဲနဲတော့ အချိန်မှတ်ထားရတာပေါ့လေ - ကျွန်တော်ကတော့ ရေတစ်ခွက်လောက် တိုက်ပြီး နင်းခိုင်းတာ - စားပွဲထိုးဆို ဖလက်ကို ပြရော :D
သူလည်း အကောင်လေး မွေးတာပဲ - ဒါပေမယ့် သူက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် - ကိုယ်ကြိုက်သလို ပုံစံယူလို့ ရတယ် - စစချင်း အိမ်ခန်းလေး တစ်ခန်းပေးပြီး စရတဲ့ ဘဝ - ပြောရရင် မိဘမဲ့ ကလေး မွေးစားရသလိုပဲ - ကိုယ့်ကိုယ် အရမ်းချစ်တယ် - တစ်ရက်လောက် မဝင်လိုက်ပဲ နောက်ရက်မှ ဝင်လိုက်မိရင်များ သူ့ခမျာ ပျော်လို့ မဆုံးဘူး ထထခုန်ပြီး ကြိုရတာ အမော - ကိုယ်မဝင်တာ ကြာလို့ ရေမချိုးပေးဖြစ်ရင်လည်း ရင်ကောင်တွေ ဝဲလို့ သူ့ခမျာ သနားစရာ - ကိုယ်နဲ့ တူတူ ကစားလို့ ပျော်နေရင်များ ခစ်ခစ် ခစ်ခစ်နဲ့ မချစ်ချစ်အောင် ရယ်တတ်သေးတယ် - သူ့ကို အဝတ်အစားလေးတွေလည်း ဆင်ရတယ် - အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ သွားပြီးလည်း ပြိုင်ခိုင်းရတယ် - ငါးတွေဘာတွေလည်း မျှားခိုင်းလို့ ရတယ်။ အဓိကက သူ ပျော်အောင် လုပ်ပေးရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါ ပျော်လာတာ - ဒါ ဒီဂိမ်းလေးရဲ့ ချစ်စရာ အားသာချက်ပဲ။
သူကတော့ Pet Society ထက် လောလောဆယ်မှာ နဲနဲ ပိုပြီး လူဆော့များတယ် - တစ်ချို့ကတော့ ဒီ PetVille ကို Pet Society ထက် ပို သဘောကျကြတယ် - ကျွန်တော်ကတော့ Pet Society မှာ ဆော့လာတာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ ဒီဘက်ကို သိပ်မလှည့်ဖြစ်ဘူး - ဒါပေမယ့် လူဆော့များတယ် ဆိုကတည်းက တစ်ခုခုတော့ အားသာချက် ရှိမှာ သေချာပါတယ်။
သူက ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ Cafe World သဘောမျိုးပဲ - ဒါပေမယ့် သူက စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်တာ - မရောင်းရမှာ တော့ မပူရဘူး ရောင်းရလွန်းလို့ ရိုက်ထုတ်ချင်စိတ်ပဲ ပေါက်တယ် :D - အဲလိုသာ လာအားပေးမယ်ဆိုလို့ကတော့ KznT တို့ ဒီတစ်သက် စားသောက်ဆိုင်ပဲ ဖွင့်စားတော့မယ် - ရောင်းကောင်းပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ဂျီဂျောင်ကျတဲ့ Customer နဲ့လည်း တွေ့တတ်သေးတယ် - ဆာနေပြီတို့ - ကြာလိုက်တာလို့ - ညစ်ပတ်လိုက်တာ လွန်ရောတို့ - ဖြစ်နိုင်ရင် အဲလို လူမျိုးဆို အပေါက်ဝကနေ စောင့်ပြီး တုတ်နဲ့ ရိုက်လွှတ်ချင်တယ် - လာမစားလည်းနေ - နင့်ဘာသာနင် စားချင်တဲ့ နေရာသွားစား ဆိုပြီး :D
သူကလည်း တော်တော်ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ် - ကျွန်းပေါ်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကူး အိပ်မက်လေးတွေ ပုံဖော်တဲ့ နေရာပေါ့ - ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် အရမ်း :)
တစ်ချို့က FarmVille ထက် Farm Town ကို ပိုကြိုက်ကြတယ် - အရင်က Farm Town ဆော့တဲ့ သူ တော်တော်များပေမယ့် ခုတော့ တော်တော်လေး နည်းသွားတာ တွေ့ရတယ် - ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် Farm Town က FarmVille ထက် ပိုဆော့လို့ ကောင်းတယ်ဗျ - ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျတော့ FarmVille က ပြင်ဆင်တာ တော်တော်ကောင်းလာတာရယ် - အရုပ်လေးတွေ ကလည်း Farm Town က အရုပ်တွေထက် ပိုပြီး အသက်ဝင်တာရယ်ကြောင့်လား မသိဘူး ကျွန်တော်တောင် Farm Town သိပ်မဆော့ ဖြစ်တော့ဘူး - ကောင်းတာကတော့ Farm Town ရော FarmVille ရော ကောင်းကြပါတယ်။
သူကလည်း ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေး - တိရစ္ဆာန်ရုံလေး ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်တီးရတာ - အကောင်လေးတွေ ဝယ် နေရာချ တစ်ခြား ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကူးပုံဖော်လို့ ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာလေးပေါ့ - ဘယ်သူ့မှ လာမလည်မှာတော့ မပူနဲ့ လူက မပြတ်ဘူး - အားကြီး အားပေးတာ - အလုပ်လုပ်တယ်ကို မရှိဘူး တစ်ချိန်လုံး ဒီ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာပဲ ပြန်ခိုင်းလည်း မပြန်ကြဘူး :D
သူလည်း အကောင်လေးတွေ မွေးတာပဲ ကြောင်လေးတွေ အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် - အစားအသောက်လည်း ပုံမှန်ကျွေး ရတယ် - သူတို့ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးရင်များ အမွှေးလေးတွေ ထောင်ထောင်ထလာတာ တကယ့် အပြင်က ကြောင်လေးတွေ အတိုင်းပဲ - တစ်ခုခု ကျွေးလိုက်လို့ ဗိုက်ဝသွားရင်ပြီး ပျော်ပြီး ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ - သူတို့ကို တွေ့ရတာ တော်တော်လေး စိတ်အပန်း ပြေတယ် - ချစ်လည်း ချစ်တယ်
ပြောရရင် သူလည်း FarmVille တို့ Farm Town တို့လိုပဲ - ဒါပေမယ့် သူက Avatar မရှိတော့ လုပ်ရကိုင်ရတာ ပိုမြန်တယ် - ကျွန်တော်တို့ FarmVille တို့ ဘာတို့မှာကျ လူပါနေတော့ ကိုယ်က click ပေးထားပြီးလည်း သူက ရိတ်တဲ့ နေရာ မရောက်လာ မချင်း တစ်မေ့ တစ်မော စောင့်နေရတာမျိုး ရှိတယ် - တစ်ခြား ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်လို့ ရတာလည်း ရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် အဲတာမျိုးကျတော့ မသမာတဲ့ နည်းတွေ မို့လို့ ဂိမ်းဆော့တာက ဂိမ်းဆော့တာနဲ့ မတူတော့ဘူး - စီးပွားရေး ဆန်သွားတယ် - ဒီ ဂိမ်လေးက အရုပ်လေးတွေလည်း ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ် - အပေါ်က နွားလေးတွေ ကြည့်ပါလား နှာခေါင်းကြီးကြီးပဲ :D
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကျွန်းလေး တစ်ကျွန်း ရှိမယ် - အဲ့ပေါ်မှာ သီးပင်စားပင်လေးတွေ စိုက်မယ် - အကောင်လေးတွေ မွေးမယ် - နောက် ကိုယ့်စိတ်ကူး အိပ်မက်ထဲက အိမ်ပုံစံလေးတွေနဲ့ အဲ့ဒီ့ ကျွန်းလေးပေါ်မှာ ဆောက်မယ် - လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက် ဆိုတာကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ကျွန်းပေါ် တိုက်အိမ်ဆောက် ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးပေါ့ :)
သူကတော့ အကောင်မဟုတ်ဘူး - လူမွေးတာ - ချစ်စရာလေး လူကောင်လေးတွေက ကောင်မလေးရှိတယ် ကောင်လေး ရှိတယ် - ကြိုက်တာ ဆော့လို့ ရတယ် - ကိုယ့် ကလေးကို ကိုယ့်ဘာသာ အဝတ်လေးတွေ ဝယ်ပေး နောက် သူများ အိမ်တွေလျှောက်လည် - အာဝါးပေးလိုက် - သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွဲကလိုက် - လက်ဆောင်လေး ပေးလိုက် - ဟာသလေးတွေ ပြောလိုက် - အပျင်းကို ပြေလို့ - ဒီလို ဂိမ်းမျိုးက မိန်းကလေး တွေ ပိုသဘောကျကြတယ်
သူ့မှာက ဆော့စရာ ဂိမ်းတော်တော်ကို များတာ - ကျွန်တော် တစ်ခုချင်း လိုက်ရှင်းပြနေလို့ကတော့ ကုန်မယ် မထင်ဘူး - အပျင်းပြေ ဆော့ဖို့တော့ တော်တော်ဆော့လို့ ကောင်းတယ် - စမ်းဆော့ကြည့်ပါလား
သူက ဘာနဲ့ တူမလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Mafia နဲ့ ဆော့တာချင်း ဆင်တယ် - သူ့မှာ Mission တွေ ရှိတယ် - အဲတာတွေ လုပ်ရတယ် - ချရာ သတ်ရတာတွေ ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် သူက နဲနဲ ကလေးဆန်တယ် - Mafia ကတော့ လူကြီးဆန်တယ် - ကျွန်တော့် အမြင်ပေါ့
ခု ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့တာ Facebook မှာ ရှိတဲ့ ဂိမ်း အကုန် မဟုတ်သေးပါဘူး - တစ်ခြား ဂိမ်းတွေလည်း အများကြီး ကျန်ပါသေး တယ် - ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတာ လူကြိုက်များ လူဆော့ အများဆုံး ဂိမ်း အမျိုး ၂၀ ပါ - ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဆော့ ကစား ကြရင်း Facebook Games တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခက်အခဲ ရှိရင် ဒီမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ နိုင်သလောက်လေး အကြံပေးပေးပါ့မယ်။
2:19 AM LeaveaComment Read More
Originally Posted by တီဘွား
Facebook account ကို Delete လုပ်ချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိလို့ပါ
Facebook account ကို Delete လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းကတော့ ( ၃ ) - ( ၄ ) နည်း ရှိပါတယ်။ အတိုဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ညွှန်လိုက်ပါ့မယ်။
အဆင့် ( ၁ ) >> ဒီဖော်ပြပါ URL http://www.facebook.com/help/contact...delete_account ကို Copy - paste လုပ်ပြီး ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့ Account ထဲကို Login ဝင်လိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၂ ) >> အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း တွေ့ရပြီ ဆိုရင် "Submit" ကို နှိပ်ပြီး သူ့ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်းဆက် သွားပါ။
ပုံမှန်အတိုင်း ကိုယ့်ကို ဒီ account ရဲ့ တကယ့် ပိုင်ရှင် ဖြစ်မဖြစ် password နဲ့ သူရိုက်ခိုင်းတဲ့ စာလုံးလေး နဲနဲပါးပါး တူအောင် ရိုက်ပေးရုံပါပဲ။
အဆင့် ( ၃ ) >> ကိုယ် အဲလို ဖျက်ပြီးသွားတာနဲ့ ကိုယ့် Email ထဲကို " နောက် ၁၄ ရက်နေရင် မင်း Facebook account ကို ဖျက်ပစ်လိမ့်မယ် " ဆိုတဲ့ စာတစ်စောင် ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ လတ်တလောမှာ Delete လိုက်တယ် ဆိုပေမယ့် Faceboook account က တကယ် မပျက်သေးပါဘူး။ ဒီ account ပျက်ဖို့ နောက်ထပ် ၁၄ ရက်စောင့်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူပြောထားတဲ့ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ Facebook ထဲကို ဘယ်အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဝင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ တကယ်လို့ သူပြောထားတဲ့ ၁၄ ရက် အတွင်းမှာ ကိုယ်က အဲ့ဒီ့ account ထဲကို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ကြောင့် ပြန်ဝင်ဖြစ်တယ် ဆိုရင် သူက ကိုယ့်ကို သံယောဇဉ် မပျက်သေးဘူး - ဒီ account နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်စရာတွေ ရှိသေးတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အနေနဲ့ Delete လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Account က ဒီအတိုင်း ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
>> account ရဲ့ တကယ့် ပိုင်ရှင် ဖြစ်မဖြစ် password နဲ့ သူရိုက်ခိုင်းတဲ့ စာလုံးလေး နဲနဲပါးပါး ရိုက်ပြီး submit လုပ်လိုက်ပြီးတည်းက Facebook account ထဲကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၄ ရက် မပြည့်မချင်း ဘယ်တော့မှ ဝင်လို့ ရမရ ပြန်မစမ်းကြည့်ပါနဲ့ - နောက် ကိုယ့် browser က cache တွေနဲ့ cookies တွေအားလုံးကိုလည်း ဖျက်ပစ်ပါ။ ဒါမှ အလွယ်တကူ ပြန်ဝင်ဖြစ်လို့ မမြင်ရမတွေ့ရ ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
>> နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်လည်ပတ်သွားလာနေကျ Website တွေမှာ ပြထားတဲ့ Facebook Share button တို့ Like button တို့ကို click မပေးမိပါစေနဲ့။ ဒါကလည်း account ထဲကို ပြန်ဝင်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီ account ကို ပြန်အသုံးပြုနေတယ် ဆိုတဲ့သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
>> နောက်ဆုံး တစ်ချက်ကတော့ Facebook account ရှိယုံနဲ့ သူ့ site မှာ account လုပ်စရာ မလိုပဲ သုံးလို့ ရတဲ့ Facebook Connect sites တွေမှာ အဲ့ဒီ ကိုယ်ဖျက်ထားတဲ့ Facebook account နဲ့ login မဝင်ပါနဲ့ signup လည်း မလုပ်ပါနဲ့။
အဆင့် ( ၄ ) >> သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ ( ၁၄ ) ရက်ကို ကိုယ်စဖျက်တဲ့ ရက်ကနေ စမှတ်ထားပြီး စောင့်ကြည့်ပါ။ ၁၄ ရက်ပြည့်ပြီ ဆိုရင် ကိုယ့် Facebook account ထဲမှာ ရှိသမှ posts, comments, တွေက အစ တစ်ခြား info တွေအဆုံး အားလုံး ထာဝရ ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
11:58 AM LeaveaComment Read More
နည်းပညာအကြောင်းတွေချည်း ရေးနေ ဖတ်နေရတာ ပျင်းနေကြမယ် ထင်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နည်းပညာအကြောင်း နားဦးမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ဂိမ်းအကြောင်း လှည့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်မိပါတယ်။ ဘယ်အကြောင်း ကျွန်တော်ရေးရင် ကောင်းမလဲ - ဂိမ်းတွေကတော့ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာ ဂိမ်းတွေ တော်တော်များတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်း လူကြိုက်လည်း များပြီး မိန်းကလေးရော ၊ ယောကျာင်္းလေးရော အွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာ တော်တော်များများ ဆော့နေတယ်လို့ သိရတဲ့ Facebook ထဲက Farmville အကြောင်းလေး ဘက် ပြန်လှည့်ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Facebook မှ Farmville ချစ်သူများအတွက် Farmville clicker ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် 12-12-2009 တုန်းက တစ်ခါ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက လောလောဆယ် ဒိတ်အောက်သွားပါပြီ။ ခုက နောက် အသစ်တစ်ခုပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ( ရ ) လလောက်က အွန်လိုင်းဂိမ်း တစ်ခု ဆော့နေရာကနေ ကျွန်တော် Facebook ဂိမ်းလောကထဲကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ် .. အဲဒီ Facebook ဂိမ်းတွေထဲမှာမှ မြန်မာတော်တော်များ ဆော့နေကြတဲ့ Farmville, Mafia, နဲ့ တစ်ခြား ဂိမ်းတော်တော်များများကို ကျွန်တော်လည်း ဆော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. အဲ့ထဲကမှ အခု ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ Farmville အတွက် Application လေး တစ်ခု အကြောင်းပါ။
ကျွန်တော်တို့ Farmville ကို စကစားတဲ့ အချိန်မှာ သိပ်မသိသာပေမယ့် နောက်ပိုင်း Level မြင့်လာတာနဲ့ အမျှ အနဲငယ်ကနေစပြီး အကြီးအကျယ်ထိ စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတာကတော့ ..
၁။ လယ်ထွန်ရတဲ့ ဒုက္ခ
၂။ မျိုးစေ့ချရတဲ့ ဒုက္ခ
၃။ လယ်ရိတ်ရတဲ့ ဒုက္ခ
၄။ တောင်တစ်နေရာ မြောက်တစ်နေရာ သွားနေတဲ့ အကောင်ပလောင်တွေဆီကနေ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အကောင်ထွက်ပစ္စည်း လိုက်သိမ်းရတဲ့ ဒုက္ခ။
၅။ ဟိုလူက လက်ဆောင်ပေး စိုက် ၊ ဒီလူက လက်ဆောင်ပေးစိုက်နဲ့ သီးချင်တိုင်း သီးနေတဲ့ အပင်တွေ - ရိတ်လို့မနိုင် သိမ်းလို့ မနိုင် ဖြစ်နေရတဲ့ ဒုက္ခ။၆။ ခုနောက်ပိုင်း အသစ်တိုးတိုးလာတဲ့ ကြက်ခြံ ၊ နွားခြံတွေကနေ ပစ္စည်းလိုက်သိမ်းရတဲ့ ဒုက္ခ။
အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Farmville ထဲမှာ အချိန်ဘယ်လောက်တောင် ပေးပြီး နေကြရမှာပါလဲ။ တစ်နာရီလား ၊ နှစ်နာရီလား ၊ သူ့ထက်ပိုဦးမလား ?? အချိန်မပေးလို့ကလည်း မရဘူး - အချိန်မပေးလိုက်ရင် ကိုယ့်နောက်ကလူတွေ ကိုယ့်ကိုကျော်တက်မယ် - ကိုယ့်ရှေ့ကလူတွေ ကိုယ် မမှီနိုင်တော့ဘူး - ကိုယ်စိုက်ထားတဲ့ အပင်လေးတွေ ညိှုးပြီး ခြောက်သွားရင် ဒုက္ခ - မတော်လို့ ခြောက်သွားပါပြီတဲ့ ပြန်အသက်သွင်းဖို့ဆို coins တန်ဖိုးက 30 ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ - ပျော်ချင်လို့ ဆော့ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းက ကိုယ့်လည်ပင်း ကို လာညှစ်နေပြီ။ ဆုတ်လည်းစူး - စားလည်းရူး - စားရမှာလည်း သဲတရှပ်ရှပ် - ပစ်ရမှာလည်း ဆီတစ်ဝင်းဝင်း - ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဒီပြဿနာရပ် တစ်ချို့ကြောင့် တစ်ချို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အလုပ်များတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ Farmville ကို စွန့်ပြီး ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ် .. သူတို့ လယ်တွေ သွားကြည့်တဲ့ အချိန်တိုင်း ခြောက်ကပ်လို့ .. ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် Farmville Bot နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘာလဲ Farmville Bot ?? Farmville Bot ဆိုတာ Farmville ဂိမ်းကို ဆော့နေတဲ့ သူတိုင်းအတွက် အရာအားလုံးကို ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်စရာ မလိုအောင် သူကနေ အလိုလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် Farmville Robot ကို ဆိုလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဂိမ်းကိုပဲ ကျွန်တော်ကဆော့ချင်တယ်။ ဂိမ်းက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ဆော့နေတာမျိုး မလိုချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီ့ လုပ်ငန်းစဉ်ခြောက်ခုလုံးအတွက် အချိန်များများမပေးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး - ( ၅ ) မိနစ်ပဲ ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ( ၅ ) မိနစ် ??
Yea, really (5) minutes.
မဖြစ်နိုင်တာ - ( ၅ ) မိနစ်တည်းနဲ့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ် ခြောက်ခုလုံး ဘယ်လိုလုပ် ပြီးနိုင်မှာလဲ - ခက်ပြီ - ကျွန်တော် အောက်မှာ လုပ်ပြသွားမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသာ Step by Step သေသေချာချာ မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ပထမတစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ကြည့်လို့ နားလည် သဘောပေါက်သွားပြီ ဆိုတဲ့ တစ်ခါ နောက်တစ်ခါ ပြန်လုပ်တဲ့ အချိန်ကျရင် တကယ် (5minutes ) ပါပဲ။ အဟုတ် - ၅ မိနစ်တည်းနဲ့ ဒီ အောက်က ဖော်ပြထားတဲ့ ခြောက်မျိုးလုံး ပြီးပါလိမ့်မယ်။
၅။ ဟိုလူက လက်ဆောင်ပေး စိုက် ၊ ဒီလူက လက်ဆောင်ပေးစိုက်နဲ့ သီးချင်တိုင်း သီးနေတဲ့ အပင်တွေ - ရိတ်လို့မနိုင် သိမ်းလို့ မနိုင် ဖြစ်နေရတဲ့ ဒုက္ခ။
၆။ ခုနောက်ပိုင်း အသစ်တိုးတိုးလာတဲ့ ကြက်ခြံ ၊ နွားခြံတွေကနေ ပစ္စည်းလိုက်သိမ်းရတဲ့ ဒုက္ခ။
Ok Men, Let's Rock !
အဆင့် ( ၁ ) - ပထမဆုံး အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကနေ Farmville Robots V2.1.12 COMPLETE PACKAGE ကို ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် Links (2) ခု ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေရာ တစ်ခုကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ လိုပါတယ်။
Here !! ( 1st choice ) ( Ifile Link ) ( 3.2 MB )
Here !! ( 2nd choice ) ( Multiupload ) ( 3.2 MB )
အဆင့် ( ၂ ) - ဒုတိယ အဆင့် အနေနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ကိုယ့်စက်ထဲကို ရောက်ရှိလာပြီ ဆိုရင် ပေးထားတဲ့ password နဲ့ rar ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ Farmville Robots V2.1.12 COMPLETE PACKAGE ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရလာပြီ ဆိုရင် အဲ့ folder ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ setup2.1_withplugins ကို install လုပ်ပါ။
အဆင့် ( ၃ ) - Installed လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Desktop ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ shortcut ကို double click ပေးပြီး run လိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၄ ) - ပထမဆုံး အနေနဲ့ FarmvilleBot ကို Run လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခုလို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ထဲမှာ ပါတဲ့ Facebook account နာမည်နဲ့ password ဖြည့်သွင်းပေးရမယ့် နေရာမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာ Farm ရှိနေတဲ့ Facebook account နာမည်နဲ့ password ကို ဖြည့်သွင်းပေးပြီး Login လိုက်ပါ။
အဆင့် ( ၅ ) - ကျွန်တော်တို့ Farm ကို စမြင်ရပါပြီ။ ကျွန်တော့် လယ် - အာမလေး မဆော့တာကြာလို့ အပင်လေးတွေ သေနေပါ ပေါ့လား :( ဒါ ကျွန်တော် ပျင်းလို့ လက်ကမြင်းပြီး ဆော့ထားတဲ့ တတိယလယ်။ လယ်က ချောက်တီးချောက်ချက်။ အိမ်တောင် မရှိဘူး။ lvl က 18။ Facebook မှာ ကိုယ့်ဘာသာ job help ခေါ် - ကိုယ့်ဘာသာ ပြန် help လို့ ရအောင် account တွေ လိုက်လုပ်ထားတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနဲ့တင် အကောင့် ( ၁၀ ) ခုလောက်ရှိတယ်။ အဖေအမေနာမည်ကနေ စပြီး တူ၊ တူမ နာမည်တောင် မချန်ဘူး။ :D
အဆင့် ( ၆ ) - အဲ့နောက်မှာ အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရမှာ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်နားလေးမှာ မြင်နေရတဲ့ Menu bar က Advanced settings မှာ အချိန်တိုးဖို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတော့ အောက်ပိုင်းရောက်ရင် နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ခု ဒီအတိုင်းလေးပဲ လုပ်ဆောင်သွားပါ။ အချိန်တိုးဖို့ကို interval ဘေးက box မှာ တိုးလျှော့လို့ ရပါတယ်။ ၉၀ - ၁၀၀ ကြားလောက်တော့ ထားပေးပါ။ နောက်လိုသလို ပြန်ချိန်လို့ ရပါတယ်။
အဆင့် ( ရ ) - နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ့်လယ်မှာ ကိုယ်ထွန်ထားတဲ့ ပေါင်းဘယ်နခု ရှိခုဆိုတာ အရေအတွက် သိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲတာကို သိရှိဖို့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Menu bar က Plugins ကို သွားပါ။ အဲကနေမှ တစ်ဆင့် Farminfo ကို double click ပေးပါ။
ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Crops အရေအတွက်ကို Farminfo ရဲ့အောက်မှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ အရေအတွက်ကို မှတ်ထားပါ။ နောက်အဆင့်တွေမှာ သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ( ၈ ) - ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ Crops အရေအတွက်ကို မှတ်သားပြီးသွားပြီ ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Market ကိုသွားပါ။
အဆင့် ( ၉ ) - ရောက်ပြီဆိုရင် ကိုယ် ဘာကို စိုက်ချင်လဲ - ကိုယ်စိုက်မယ့် သီးနှံရဲ့ နာမည်ကို သွားမှတ်ပါမယ်။ လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် lvl နဲ့ အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်မယ့် - Peppers ကိုပဲ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မိမိစိတ်တိုင်းကျပါ။ ဒီနေရာမှာ သိထားရမှာက မိမိစိုက်ချင်တဲ့ သီးနှံရဲ့နာမည်ကိုပဲ မှတ်ထားဖို့ပါ။ ကလစ်ပေးပြီး လိုက်စိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ သီးနှံရဲ့ နာမည် မှတ်ယုံပါပဲ။ အခု Market ထဲကို လာတယ် ဆိုတာလည်း မိမိစိုက်ချင်တဲ့ သီးနှံနာမည် မှတ်ဖို့ လာခဲ့တာပါ။ တစ်ခြား ဘာမှ လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မိမိ lvl အလိုက် နာရီနည်းနည်း XP များများ ကောင်ကို ကျွန်တော် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ Peppers -
( မှတ်ချက် - ဒီနေရာမှာ သိထားရမှာ တစ်ခုက Farmville ကနေ အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ ပြောင်းပြောင်းပေးတဲ့ Seeds မျိုးတွေ စိုက်လို့ မရဘူး ဆိုတာပါ။ တစ်ခြား permanent ပေးထားတဲ့ Seeds နာမည်တွေကို သာ မှတ်ထားပေးပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ နောက်အဆင့်တွေမှာ တွေ့ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ )
အဆင့် ( ၁၀ ) - အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မိမိစိုက်ပျိုးမယ့် Seeds အမည်ကို မှတ်သားပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ အောက်မှာဖော်ပြ ထားတဲ့ အတိုင်း Menu bar မှာ ရှိနေတဲ့ Plugins ကနေ တစ်ဆင့် Settings ကို သွားပါမယ်။ Settings ကို double click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၁၁ ) - အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း Settings windows ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ( ၁၂ ) - အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Windows ကို မြင်ရပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းတစ်ဆင့်ချင်း ပြင်ဆင်ရပါမယ်။
အမှတ်စဉ် ( ၁ ) - Harvest Crops, Plow, Plant, Harvest Trees တွေဘေးမှာ ရှိတဲ့ Check box တွေမှာ တစ်ခုချင်းစီ ရွေးချယ်ပေးပါ။ ( ခုလိုရွေးချယ်ပေးထားမှ ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို Farmville Robot ကနေ Auto လုပ်ဆောင် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
အမှတ်စဉ် ( ၂ ) - " + " ဖြင့် ဖော်ပြထားသော နေရာအား click ပေးပါ။ ( Plant လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် seed ချရန် မည်သည့် seed အား ပျိုးမည်ဆိုသည်အား ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ )
အမှတ်စဉ် ( ၃ ) - ပေါ်လာသော box မှ တစ်ဆင့် အဆင့်( ၉ ) တွင် မှတ်သားထားခဲ့သော seed အမည်အား down arrow မှနေ၍ ရှာဖွေရွေးချယ်ပေးပါ။
အမှတ်စဉ် ( ၄ ) - ဖော်ပြပါ seed အား မိမိလယ်တွင်ရှိသော Crops အရေအတွက်မှ Crops ဘယ်နခု မှာစိုက်ပျိုး မည်ဆိုသည်အား ရွေးချယ်ပေးပါ။ ( ကျွန်တော့်လယ်မှာတော့ အဆင့် ( ရ ) မှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ တွေ့ရှိချက်အတိုင်း crops 246 ခု ရှိလို့ 246 အနေနဲ့ ဖြည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမှတ်စဉ် ( ၅ ) - ကျွန်တော့် lvl အနေနဲ့ peppers က စိုက်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့ကို Default Seed ပေးထားလိုက်ပါ။ ( မပေးချင်လည်း ရပါတယ်။ )
အမှတ်စဉ် ( ၆ ) - နောက်ဆုံး အနေနဲ့ Add ကို click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၁၃ ) - အားလုံး လုပ်ဆောင်ပြီးသွားချိန်မှာ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ ရှိနေတဲ့ Close ကို click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၁၄ ) - Farmville Robot စတင် အလုပ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေလဲ ဆိုတာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Farmville Robot windows ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ဆုံး အဆင့် ( ၆ ) မှာ သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တဲ့ အချိန်သတ်မှတ်ချက် အတိုင်း Farmville Robot က ကျွန်တော့်လယ်မှာ ဆိုရင် စက္ကန့် ( ၉၀ ) ကြာတိုင်း တစ်ခါ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် 90 ကနေ ရေတွက်လာလိုက်တာ - 12 ကိုရောက်နေပါပြီ။
အဆင့် ( ၁၅ ) - "0" ကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း " Working Farm " ဆိုတဲ့ စာသားအဖြစ်ကို ပြောင်းသွားပြီး အောက်က windows မှာလည်း Farm နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခြား ဘာမှ မလုပ်ဖို့နဲ့ Robot က အလုပ်လုပ်နေပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း အသိပေးစာ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာ ( ၁ ) မိနစ် တန်သည် ( ၂ ) မိနစ် တန်သည် စောင့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ စက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ စောင့်မနေချင်လည်း minimize ပေးထားပြီး မိမိလုပ်ချင်ရာ အခြားတစ်ခု လုပ်ဆောင်နေလို့လည်း ရပါတယ်။
အဆင့် ( ၁၆ ) - Cycle တစ်ကြိမ်မှာ Farmville က Robot အလုပ်တစ်ခုပဲ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာ - ကိုယ်က Harvest ရော ၊ Plow ရော ၊ Plant ရော သုံးခုလုံး Robot ကို ခိုင်းစေထားတယ်ဆိုရင် 90 seconds - ပထမ " Working Farm " တစ်ပတ်မှာ Robot က Harvest ၊ နောက် 90 seconds " Working Farm " တစ်ပတ်မှာ Plow ၊ နောက် 90 seconds " Working Farm " တစ်ပတ်မှာ Plant စသဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်လယ်က ပထမ " Working Farm " တစ်ပတ်မှာ Robot ကလုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Plow ထားမှုပါ။ ဒီလယ်က ကျွန်တော့် တူလေးအတွက် စိုက်ထားတာ :D
အဆင့် ( ၁ရ ) - ဒါကတော့ ဒုတိယ " Working Farm " တစ်ပတ်မှာ Robot ကလုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Plant ထားမှုပါ။
အဆင့် ( ၁၈ ) - Robot က လိမ်မာပါတယ်။ " Working Farm " Cycle တစ်ကြိမ်ပြီးတိုင်း သူဘာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ခုလို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်လယ်မှာ နွားတွေ အကောင်တွေ မရှိလို့ သူတို့ဆီကနေ ဘယ်လို Harvest လုပ်တယ်ဆိုတာ ပုံမပြနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မပူပါနဲ့ အဆင့် ( ၁၂ ) မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းသာ Harvest Crops နဲ့ Harvest Trees မှာ သေသေချာချာ click ပေးခဲ့ Robot က သေသေချာချာ ရိတ်သိမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် ( ၁၉ ) - ကြည့် - နေရင်းထိုင်ရင်း ဘာမှလည်းမလုပ်ရပဲ Ribbon တွေဘာတွေ ရလို့။ :D
အဆင့် ( ၂၀ ) - အဲ lvl လည်း တက်သွားပြီဗျ။ :D
အဆင့် ( ၂၁ ) - လုပ်ငန်းစဉ် ခြောက်ခုကို Farmville Robot က ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တယ် ဆိုတာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ Farmville Robot က ဒီလောက်ပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်တာလား။ လူဆိုတာမျိုးက တစ်ခုရရင် နောက်တစ်ခု လိုချင်တာမျိုး ဆိုတော့ အထွန့်တက်စရာ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီ လုပ်ငန်းစဉ် ခြောက်မျိုးတည်း လုပ်ဆောင်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင် နိုင်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဘာတွေလဲ - ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ဆိုတာတော့ မိမိဘာသာ ဉာဏ်ရှိသလို အဆင့် ( ရ ) မှာ ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ Plugins အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာ ကြပါကုန်။
မြန်မာ့ လယ်ယာလောက နှင့် မြန်မာ့ လယ်ယာနည်းပညာ ကဏ္ဍ မြင့်သထက် မြင့်တက်၍ မြန်မာ့လယ်သမားများ lvl 70 မြန်မြန် ရောက်ကြပါစေသောဝ် ...... :D
အကြံပြုချက် - ဤဖော်ပြပါအကြောင်းအရာသည် သင့်အတွက် အကျိုးရှိသည်ဟု ထင်ပါသလား ?? တစ်စုံတစ်ယောက်အား မျှဝေလိုစိတ် သင့်ထံတွင် ပေါ်ပေါက်လာပါသလား ?? အကယ်၍ သင်ဝေမျှချင်လျှင် ဤ ပို့စ်အား ကော်ပီကူး၍ ဝေမျြှခင်းထက် ဤပို့စ်တည်ရှိရာ myanmarfamily သို့ သင့် အသိမိတ်ဆွေအား လာရောက်လည်ပတ်စေရန် links ပေး၍ myanmarfamily ၏ ဂုဏ်သတင်းအား ကျယ်ပြန့်စေရန် ဆောင်ကျဉ်းပေးစေလိုပါသည်။
6:16 PM LeaveaComment Read More